RED CHAIR MEETS PRESENTER KYAW HTET AUNG
Yope June 1, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ YOPE ရဲ့ RED CHAIR မှာ မြင်တွေ့ရမယ့်သူက အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ကျော်ထက်အောင် ဖြစ်ပါတယ်. အမြဲတမ်း ပရိသတ်ကို suprise လုပ်ရတာ ကြိုက်တဲ့ ကိုကျော်ထက်အောင် YOPE ရဲ့မေးခွန်း ၅ခုကို ဘယ်လို suprise ဖြစ်အောင်ဖြေထားသလဲဆိုတာ video လေးမှာ ကြည့်ပြီး အားပေးပါဦး. www.yope.com.mm
Yope Star – MM Thein Tan
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. မြန်မာပြည်သိန်းတန် လို့ဆိုလိုက်ရင် သူ့ရဲ့ ထုးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုပြေးမြင်မိမှာပါ. ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ YOPE star အစီအစဉ်ရဲ့ Red Chair ပေါ်မှာသူရောက်နေပါပြီ.ဒီတော့ yope star ရဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေပေးသွားမလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှု အားပေးပါဦးနော်.. YOPE Star ဆိုတာ YOPE လူငယ်အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်.. လူငယ်တွေ နှစ်သက်တဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် YOPE Star အစီအစဉ်မှာ ဘယ်အောင်မြင်နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေ တွေ့ဆုံပြီးသွားပြီဆိုတာသိရဖို့အတွက် စာသားဖြင့် ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်ပါ. အချစ်ဆုံးတေးချစ်သူ ဖန်တီးပေးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ သီချင်းဆိုရတာ အားဖြစ်စေတယ်
Yope September 1, 2017
G​alaxy Star Winner ဖြစ်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်က…..? Galaxy Star Grand Final မှာ Winner ဖြစ်ဖို့ သူ့မှာ လျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်လို့ နေမင်းအိမ်ကပြောပါတယ်။ နေမင်းအိမ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ? YOPE Red Chair ရဲ့မေးခွန်းတွေကို သူဘယ်လိုပြန်ဖြေပေးထားလဲ? #YOPE_REDCHAIR
ဘာကြောင့်သင်ဟာ X-Box ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာတာပါလဲ?
ဒါကြောင့် နာမည်ကြီး စတား X-Box ကိုယ်တိုင်ကို မေးကြည့်ရာ X-Box ဟာ မိသားစုတန်ဖိုးတွေအကြောင်း၊ သူ Hip-Hop အပေါ် သံယောဇဉ်နဲ့ ဒုတိယမြောက် Album အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ကြည့်ကြရအောင် …
YOPE Star: Ye Naung
Yope September 28, 2016
မင်္ဂလာ ညနေခင်းပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေ့ YOPE Star အစီအစဉ်ရဲ့ Red Chair ပေါ်ရောက်ရှိလာသူကတော့ Hip Hop အဆိုတော် ရဲနောင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. Yope star မေးခွန်း ၅ ခုကိုတော့ သူဘယ်လိုမျိုးဖြေပေးထားလဲဆိုတာကိုတော့ video လေးမှာကြည့်ပြီးအားပေးပါဦးနော်..